Tsy ampy ny fanaka mivalona rehefa manana safidy vaovao alohan'ny ianao. Mihaona amin'ny IKEA Home hendry, rafitra automatique an-trano any Suède. Vao tsy ela akory izay ny teknolojia dia nanandrana nandresy ny tsena, ary miaraka aminao izahay amin'ity làlana ity ary milazalaza ireo sensor, blinds ary fitaovana hafa.
Apple HomeKit, IKEA Home Smart, Vaovao, Smart Home
Fitaovana Ikea bebe kokoa miaraka amin'ny fanohanan'ny HomeKit
paoma, homekit, ikea
Miaraka amin'ny fanavaozana farany ny vavahady misy azy, Ikea dia hanolotra tsy ho ela ny fanohanan'ny Apple HomeKit ho an'ny fitaovana roa hafa ao amin'ny andiany TRÅDFRI. Miresaka momba ny hotkey sy sensor tsy misy tariby aho. Fanavaozana ny mikirao praogramanao ho an'ny laharana vavahady 1.13.21 ...
Fampidirana ny tontolon'ny IKEA Smart Home
ikea, trano mahay, manan-tsaina an-trano
IKEA koa manana rafitra Smart Home manokana! Amin'ity horonantsary ity dia hanome anao fampahafantarana momba ny tontolon'ny jiro maranitra, jamba ary feo avy any IKEA aho.
IKEA Home Smart, hevitra
IKEA Motion Sensor - Famerenana horonantsary
sensor sensor, ikea, mahay ao an-trano
Fotoana famerenana indray amin'ny faran'ny herinandro! Fotoana ho an'ny fitaovana IKEA hafa. Ary tahaka ny itiavako ny vokatr'izy ireo dia tsy nety ity iray ity ... Fa fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny famerenana. Tonga soa!
IKEA sensor sensor Review
Aqar, sensor sensor, ikea, mahay ao an-trano
Ny fitaovana sasany dia tsy dia tsara loatra ... azonao jerena momba izany rehefa andramana azy ireo. Mampalahelo fa ny tsindry IKEA sensor sensor tamin'ity famerenana ity dia nivadika ho vokatra toy izany. Fomba hisehoan'ny sensor an'ny hetsika IKEA ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, FIBARO, Google Home, Home Assistant, IKEA Home Smart, Vaovao, openHAB, Fandraisana Xiaomi
Ny Vondrona eoropeana dia manao fanadihadiana momba ny tontolo ekolojika Google, Apple ary Amazon
19 Jolay 2020
Alexa, Mpanampy Google, google home, homekit, foza, Vondrona Eoropeana
Nanangana fanadihadiana hafa hanoherana ny goavan'ny teknolojia lehibe indrindra ny manampahefana Antitrust. Ny asan'izy ireo dia ny manadihady raha mampiseho ny antony monopetrika ny ekosistemika. Ny anjara iray manontolo dia tantanan'ny Kaomisera Eropeana ho an'ny Fifaninanana, Margrethe Vestage. Te ho azony antoka izy ...